Miantso ny rehetra hanaraka hatrany ny fepetra izay raisin'ny fanjakana manoloana ity valan'anretina coronavirus ity ny Fiangonana Loterana Malagasy, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny Pastora Dr Rakotonirina David, filohan’ny Foibe FLM.
Handray anjara amin'ny fiahiana ireo sahirana ny FLM hanatanteraka fanampiana, ka amin'ireo tobim-pitsaboana miisa 53 an'ny SALFA (SAmpan'asa Loterana momba ny FAhasalamana) sy ireo Toby rehetra eto amin'ny sahan'ny FLM no anatanterahana izany.
Fitaovana fiarovana amin'ny fihanaky ny valanaretina sy fanampiana amin'ny foto-tsakafo ilain'ny Olombelona ireo fanampiana ireo.
Hitatitra sy hanao ny fitsinjarana ny fanampiana ny fiara tsy mataho-dalana izay an'ny HoverAid Madagascar, izay mpiara-miasa amin'ny FLM. Hiainga anio sabotsy 04 Aprily ireo fiara ireo. Hisy ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana amin'izany.